Personal Driver | Great Wall Group of Companies ﻿
● Personal Driver အဖြစ် အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်နှင့်အထက် ရှိရမည်။
● စကားပြောပြေပြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။
● ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူ ဖြစ်ရမည်။
● လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ရံဖန်ရံခါ နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
● ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အား
● Salary is negotiable.
Work location No.(79/F), Corner of Sein Pan Street & Ingyin Street, Bayint Naung Trading Compound, Yangon,Myanmar
Personal Driver Driver, Security & Cleaning Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobs in Yangon Great Wall Group of Companies Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Manufacturing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon